Aịzaya 34 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
34 Unu mba dị iche iche, bịanụ nso nụrụ.+ Unu mba dị iche iche,+ geenụ ntị. Ka ụwa na ihe niile jupụtara n’ime ya ṅaa ntị,+ elu ala+ na ihe niile bi na ya.+ 2 N’ihi na Jehova na-eweso mba niile iwe,+ o nwekwara ọnụma megide ndị agha ha niile.+ Ọ ga-ebibi ha; ọ ga-egbu ha.+ 3 A ga-atụfu ndị ha e gburu egbu; ozu ha ga na-esi ísì;+ ugwu ga-agbaze n’ihi ọbara ha.+ 4 Ìgwè ihe niile dị n’eluigwe ga-erekasị.+ A ga-afụkọta eluigwe+ dị ka akwụkwọ mpịakọta; ihe niile dị na ya ga-akpọnwụ, dị ka akwụkwọ osisi vaịn si akpọnwụ wee dapụ, dịkwa ka mkpụrụ vaịn fịkpọrọ afịkpọ nke si n’osisi fig dapụ.+ 5 “N’ihi na ọbara ga-ekpuchi mma agha m+ n’eluigwe. Lee! Ọ ga-abịakwasị Idọm,+ bụ́ ndị m ga-ebibi+ n’ikpe ziri ezi. 6 Jehova nwere mma agha. Ọ ga-ejupụta n’ọbara.+ A ga-eme ka o jupụta n’abụba, jupụtakwa n’ọbara ụmụ ebule na mkpi, na abụba+ si n’akụrụ ebule. N’ihi na Jehova nwere àjà ọ kwadebere na Bọzra, ọ ga-asụkwa ndị mmadụ akwụ n’ala Idọm.+ 7 Atụ́+ ga-eso ha gbadata, ma ụmụ oké ehi ma ndị nke dị ike;+ ọbara ga-ede ala ha, ájá ha ga-ejupụtakwa n’abụba.”+ 8 N’ihi na Jehova nwere ụbọchị ịbọ ọbọ,+ afọ ọ ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọjọọ niile e mere Zayọn.+ 9 A ga-eme ka iyi ya ghọọ korota, meekwa ka ájá ya ghọọ sọlfọ; ala ya ga-adị ka korota na-ere ọkụ.+ 10 N’ehihie ma ọ bụ n’abalị, a gaghị emenyụ ya emenyụ; anwụrụ ọkụ ya ga na-akwụgo ruo mgbe ebighị ebi.+ Ọ ga-abụ ebe kpọrọ nkụ site n’ọgbọ ruo n’ọgbọ;+ ruo mgbe niile ebighị ebi, ọ dịghị onye ga-esi na ya gafee.+ 11 Okwolo na ebi ogwu ga-ebichi ya, ikwiikwii ntị ogologo na ugoloọma ga-ebi na ya;+ ọ ga-eji eriri ịtọgbọrọ n’efu nke e ji atụ̀ ihe+ na nkume mbibi nke e ji atụ̀ ihe tụọ ya. 12 Ndị ya a ma ama—ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha a ga-eme eze, ndị isi ya niile ga-aghọ ihe efu.+ 13 Ogwu ga-eto n’ụlọ elu ndị dị n’ime ya, ahịhịa akụwa na ahịhịa ogwu ga-etokwa n’ebe ya ndị e wusiri ike;+ ọ ga-aghọkwa ebe obibi nke nkịta ọhịa,+ ogige nke enyí nnụnụ.+ 14 Anụ ọhịa ndị bi n’ebe mmiri na-adịghị ga-ezute anụ ndị na-agbọ ụja, ọbụna mmụọ ọjọọ yiri ewu+ ga-akpọ ibe ya òkù. Ee, nnụnụ abalị ga-atụsara ahụ́ n’ebe ahụ, nwetakwa ebe ọ ga-ezu ike.+ 15 Agwọ nke na-agba ka akụ́ akpawo akwụ́ ya n’ebe ahụ, yiekwa àkwá, ọ ga-abụ ha, chịkọtakwa ụmụ ya n’okpuru ndò ya. Ee, n’ebe ahụ ka agụ nkwọ+ ga-ezukọta, oké na nne oké na nne. 16 Chọọnụ n’akwụkwọ+ Jehova ma gụpụta ya n’olu dara ụda: ọ dịghị otu n’ime ha a na-achọ achọ;+ ọ dịghịkwa nke ọ bụla n’ime ha na-enweghị oké na nne, n’ihi na ọ bụ Jehova ji ọnụ ya nye ya n’iwu,+ ọ bụkwa mmụọ ya chịkọtara ha.+ 17 Ọ bụ Ya feere ha nza, ọ bụkwa aka ya ji eriri e ji atụ̀ ihe+ keere ha ebe ahụ. Ha ga-ebichi ya ruo mgbe ebighị ebi; ha ga-ebi na ya site n’otu ọgbọ ruo n’ọgbọ ọzọ.